ဖတ်ကြည့်သင့်သော စာအုပ်တစ်အုပ်အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Literature/Books » ဖတ်ကြည့်သင့်သော စာအုပ်တစ်အုပ်အကြောင်း
Posted by black chaw on Oct 4, 2011 in Literature/Books | 17 comments
အကြိုက်တွေ့မိသော စာအုပ်လေးတစ်အုပ် အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာသိန်းလွင် ရေးသားပြီး တူဒေးစာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေသော
“ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဘ၀အောင်မြင်ရေး အလေ့အကျင့်များ “ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
YOU CAN WIN BY SHIV KHERA လို့ဖေါ်ပြထားတဲ့ ဘာသာပြန်စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ဝေခဲ့တာကတော့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် မတ်လကတည်းကပါ။
ဖတ်ဘူးတဲ့လူတွေတောင် တော်တော် များများ ရှိနေရော့မယ်။ လူတစ်ယောက် အောင်မြင်ဘို့အတွက် စိတ်နေစိတ်ထားအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို
ဒီစာအုပ်ကို ကျွန်တော် ကြိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကလည်း နားလည်လွယ်တဲ့ နမူနာလေးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာအချို့ကို အရင်းအတိုင်း တင်ပြခွင့်ပြုပါ။
“ ပွဲဈေးတစ်ခုတွင် ဘူဘောင်းများရောင်းပြီး အသက်မွေးသည့် လူတစ်ဦးရှိသည်။ နီ၊ ၀ါ၊ ပြာ၊ စိမ်း ရောင်စုံ ဘူဘောင်းများ
ရောင်းပါသည်။ အရောင်းထိုင်းလာတိုင်း သူသည် ဟေလီယံဓါတ်ငွေ့ ထည့်ထားသော ဘူဘောင်းကို လေထဲသို့လွှတ်တင်ပါသည်။ ကလေးတို့ အ၀ယ်လိုက်လာပြီး အရောင်းသွက်လာပြန်ပါသည်။ ဤနည်းကို သူသည်
တစ်နေကုန် အသုံးချပါသည်။ တစ်နေ့တွင် သူ၏အင်္ကျီစအား ဆွဲနေသည်ကို သူသိရှိခံစားရပါသည်။ လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ
ကောင်ငယ်လေးတစ်ဦးကို တွေ့ရသည်။ “ အမည်းရောင် ဘူဘောင်းကို လွှတ်ရင် တက်ပါသလားခင်ဗျာ “ ဟု ကလေးက
မေးပါသည်။ ကလေး၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို အံ့သြသွားပါသည်။ “ သားလေးရယ် ဘူဘောင်းအရောင်က အရေးမကြီးပါဘူး။
ဘူဘောင်းထဲထည့်တဲ့ ဓါတ်ကြောင့် ဘူဘောင်းအပေါ်ကိုတက်တာ “ ဟု ကိုယ်ချင်းစာနာသောစိတ်ဖြင့် ပြန်ဖြေခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘ၀သည်လည်း အလားတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ လူသား၏ အတွင်းစိတ်ထားသည် သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အား အဆင့်မြင့်တက်အောင် တွန်းပို့ပေးသော အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နေစိတ်ထားပင်ဖြစ်သည်။ “
“ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ၀ီလီယံဂျိန်းမ်စ်က “ လူသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ထားကို ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် သူတို့ဘ၀ကို
ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း ရှာဖွေသိရှိလာကြတယ်။ အဲဒီအချက်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့အရွယ် မျိုးဆက်နွယ်များရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး
သော ရှာဖွေတွေ့ရှိချက် ဖြစ်ပါတယ် “ ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။
“ ကားလ်ဂါရီမျှော်စင်ကြီးသည် ၁၉၀.၈ မီတာမြင့်သည်။ စုစုပေါင်း အလေးချိန် ၁၀၈၈၄ ရှိသည့်အနက် ၆၃၄၉ တန်သည်
မြေကြီးအတွင်း ၀င်နေပါသည်။ စုစုပေါင်းတန်ချိန်၏ ၆၀% နီးပါးမှာ အောက်ခြေခိုင်အောင် မြေတွင် မြှပ်ထားပါသည်။ ကြီး
မားသော အဆောက်အဦးများတွင် အခိုင်မာဆုံးသော အောက်ခြေရှိသည်ကို ဤအချက်က သက်သေပြနေပါသည်။ အဆောက်အဦးကြီးများသည် ခိုင်မာသောအောက်ခြေပေါ်တွင် ရပ်တည်ရပါသည်။ လူ့ဘ၀တွင် အောင်မြင်မှုသည်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အောင်မြင်မှုအတွက် အောက်ခြေမှာ စိတ်နေစိတ်ထားပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏စိတ်နေစိတ်ထား သည် အောင်မြင်မှုအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါသည်။”
သစ်ခုတ်သမား ဂျွန်သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် (၅) နှစ်တာအမှုထမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း မခံရပါ။ ကုမ္ပဏီက ဂျွန်ကိုငှားလိုက်ပါသည်။ (၁)နှစ်အတွင်း ဘီလ်မှာ ရာထူးတိုးခဲ့ပါသည်။ ထိုအဖြစ်သည် ဂျွန်ကို စိတ်မခံသာအောင် ဖြစ်စေခဲ့ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မကျေနပ်မှုကို ပြောရန် ဂျွန်သည် ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲထံသွားပြီး အခြေအနေကို တင်ပြပါသည်။ “ခင်ဗျားကယခင်(၅)နှစ်က ဖြတ်တဲ့အတိုင်း သစ်ပင်တွေကို ဖြတ်နေတာကိုး၊ ကျွန်တော်တို့က ထုတ်လုပ်မှုရလဒ်တိုးတက်
မှုကို ရှေ့ရှုတဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ ခင်ဗျားထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင် ခင်ဗျားကို ရာထူးတိုးပေးချင်ပါတယ်။”
ဟု ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲက ရှင်းပြပါသည်။ ဂျွန်သည်အလုပ်ပိုကြိုးစားသည်။အချိန်ပိုယူ၍ သစ်ပင်တွေကို ဖြတ်ပါသည်။ သို့သော် သစ်ပင်အရေအတွက်ကို ပိုမဖြတ်နိုင်ပါ။ ထိုအခါကုမ္ပဏီအကြီးအကဲထံပြန်သွားပြီး အခြေအနေကို ပြန်ပြောပြပါ
သည်။ ထိုအခါကုမ္ပဏီအကြီးအကဲက သူ့အခက်အခဲကို ဘီလ်အား ပြောပြရန် တိုက်တွန်း အကြံပေးပါသည်။ ထိုမှ ဂျွန်သည် “ သစ်ပင်များများ ဖြတ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုစီမံပါသလဲ “ ဟုဘီလ်အားမေးပါသည်။ “ကျွန်တော်သစ်ပင်တစ်ပင်
ဖြတ်ပြီးတိုင်း အချိန် ၂ မိနစ်နားပြီး နားချိန်မှာ ပုဆိန်ကို ထက်နေအောင်သွေးပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ ပုဆိန်ကို နောက်ဆုံးသွေး
တဲ့ အချိန်ဟာ ဘယ်တုန်းကလဲ” ဟု ဘီလ်က ဂျွန်အားပြန်မေးပါသည်။ နောက်ဆုံးပိတ်မေးသော မေးခွန်းသည် ချက်ကောင်းကို ထိသော ကျည်ဆံပမာ အထိမှန်သဖြင့် ဂျွန်ဘာလုပ်ရမည်ကို ကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားပါသည်။
အတိတ်က၀င့်ထည်မှု၊ ပညာသင်ယူမှုတွေသည် လက်တွေ့ပြသနာကို ထိထိမိမိ မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် သစ်ခုတ်လက်နက် အစဉ်ထက်နေအောင် မှန်မှန်သွေးပေးဖို့ လိုပါသည်။
အထက်ပါနမူနာလေးများကြောင့် ကျွန်တော်တို့လူသားများတွင် စိတ်နေစိတ်ထား အရေးကြီးကြောင်းကို လွယ်လွယ်ကူကူ သဘောပေါက်
စေသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ ထို့ပြင် ကျွန်တော်အပါအ၀င် လူတော်တော်များများ မသိမသာကြုံတွေ့နေရသော
ပြသနာတစ်ခုဖြစ်သည့် သင်ကြားမှုရပ်တန့်သည့် ကိစ္စအား သစ်ခုတ်လက်နက် နမူနာနှင့် ဖြေရှင်းပေးလိုက်သည်ဟု
ပညာရေးဆိုသည်မှာ ကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ ခေါင်းစဉ်အောက်မှ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်နှင့် ဤစာအုပ် အညွှန်းကို အဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါ။
လမ်းဘေးတွင် ပေါင်မုန့်အသားညှပ် ရောင်းသူတစ်ဦးရှိပါသည်။ သူစာမတတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူသည် သတင်းစာမဖတ်ပါ။
နားလည်းမကြားပါ။ ထို့ကြောင့်သူသည် ရေဒီယိုလည်း နားမထောင်ပါ။ မျက်စိအမြင်လည်း အားနည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် ရုပ်မြင်သံကြားလည်း မကြည့်ပါ။ သို့သော် သူသည် အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များကို စိတ်အားထက်ထက်သန်သန်
တက်တက်ကြွကြွ ရောင်းချပါသည်။ ရောင်းကောင်း၍ အမြတ်များစွာ ရပါသည်။ အသားတွေပိုဝယ်ပါသည်။ ပို၍ကြီးပြီး
ပို၍ကောင်းသော ပေါင်းဖိုဝယ်ပါသည်။ သူ၏လုပ်ငန်းကောင်းမွန်တိုးတက်နေသဖြင့် တက္ကသိုလ်မှ ပြီးစသူ့သားက ဖခင်၏ အလုပ်တွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ မကြာမီမှာပင် ထူးဆန်းသော အဖြစ်အပျက် ကြုံလာပါသည်။ တစ်နေ့တွင်သား က “အဖေ အစစအရာရာ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းနေတာ အဖေမသိဘူးလား” ဟု မေးပါသည်။ “ဘာလဲ၊ အဖေမသိဘူး၊ ပြောပြပါဦး” ဟု ဖခင်က ပြန်ပြောပါသည်။ “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အခြေအနေက မကောင်းဘူး၊ ပြည်တွင်းအခြေအနေက ပိုဆိုးနေတယ်၊ သားတို့ပိုဆိုးလာမယ့်အချိန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားဘို့လိုတယ်”ဟုသားက ရှင်းပြပါသည်။ ထိုအခါ ဖခင်ဖြစ်
သူက စဉ်းစားပါသည်။ “ငါ့သားက တက္ကသိုလ်ထွက်၊ သတင်းစာဖတ်တယ်၊ ရေဒီယိုလည်းနားထောင်တယ်၊ အခြေအနေ ကို သူကသိမှာပဲ၊ သူပြောတာကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် မယူဆသင့်ဘူး” ဟု စဉ်းစားသည်။ နောက်နေ့တွင် အသားနှင့်ပစ္စည်း များကို လျှော့မှာသည်။ ဈေးရောင်းရာတွင်လည်း စိတ်အားတက်ကြွထက်သန်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဖြတ်သွား ဖြတ်လာများကလည်း သူ့ဆိုင်တွင် ရပ်ပြီး အသားညှပ်ပေါင်မုန့် အ၀ယ်ကျဲလာပါသည်။ ချက်ခြင်းအရောင်းကျလာပါသည်။ “သားရေ၊ သားပြောတာမှန်တယ်၊ ကြိုကြိုတင်တင် သတိပေးတာ အဖေ၀မ်းသာတယ်” ဟု ဖခင်က သားအားပြောပါသည်။
ပုံပြင်လေးက ဒီမှာဆုံးပါသည်။ ပုံပြင်မှ ယူနိုင်သောသင်ခန်းစာများကိုတော့ စာအုပ်ထဲကျမှသာ ဆက်ဖတ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
ဒေါက်တာ သိန်းလွင် ဘာသာပြန်သော “ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဘ၀အောင်မြင်ရေး အလေ့အကျင့်များ “
စာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဘို့ တိုက်တွန်းပါသည်ခင်ဗျား။
စာမြည်းနဲ့တင် တော်တော်သဘောကျသွားပြီ …
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေကို မဖတ်ပါဘူး … ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးတာလဲပါတာပေါ့ … အခုလက်ရှိမှာတော့ စိတ်ဓါတ်တွေအရမ်းကျနေချိန်ဆိုတော့ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားနေချိန်မှာ အခုလိုအမြည်းလေးတွေ့လိုက်တာနဲ့တင် ပြေးဝယ်ပြီး ဖတ်ကြည့်ချင်စိတ် ပေါက်လာပါတယ် …
မှန်ပ စာမြည်းကလေးပေးလို့ သဘောကျသွားပြီဗျာ
အဲဒီစာအုပ်ကို PDF ဖိုင်လေးနဲ့ စာကြည့်တိုက်တစ်ခုမှာ တင်ပေးထားစေလိုပါတယ်။ အများအတွက် ဖတ်ဖြစ်စေတာပေါ့နော်…။
စူပါမတ်ကက် တွေမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူရှိနေပါတယ်ဗျာ။
အသိပညာဖလှယ်ပေးတဲ့ ဘလက်ချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ စာအုပ်ကောင်းလေးတွေတွေ့တိုင်း ဝေမျှနိုင်ပါစေ။
ဒီလိုစာပေမျိုးပေါ့..ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ဇတ်ကွက်ကိုမျက်စိ ထဲမှာမြင်လာပီး..
မမေ့နိုင်တဲ့ ရသမြောက် အသိအလင်းတခုကို ပေးတယ်ဗျ.
စာမြည်းဖတ်ကြည့်ထဲက တော်တော်ဖတ်ကောင်းပြီး အနှစ်သာရရှိမယ့် စာအုပ်ဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပေမယ့် ခုချိန်မှာက စာအုပ်ဈေးတွေက အရမ်းကြီးနေရင်တော့ မ၀ယ်နိုင်သေးတဲ့ဘ၀ကိုတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ စာအုပ်ဖတ်ချင်ရင် မ၀ယ်နိုင်သေးရင် စာအုပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ စာမြည်း သွားသွားဖတ်တယ်။ တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ သွားသွားဖတ်တယ်။ အဲလိုဖတ်ရင် တစ်အုပ်ကို တစ်လလောက်တော့ဆို အကုန်ဖတ်ပြီးတယ်လေ… တချို့ဆိုင်တွေက လာရင်ခုံတောင်ပေးထိုင်ဖတ်တယ်။ စာအုပ်တွေကိုတော့ အပိုင်ဝယ်ထားချင်တယ်။ အချိန်မရွေး ဖတ်လို့ရတာပေါ့နော်။
စာအမြည်းလေး ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်လေး သဘောကျမိတယ်
ဒီတစ်ခါ စာအုပ်ဆိုင် သွားရင် ဝယ်မယ့်စာရင်းထဲမှာတော့ စာအုပ်နာမည်လေး
ဟုတ်တယ်ဗျာ…. အဲလို စာအုပ်ကောင်းလေးတွေကို ဒီလို ပုံစံ စာမြည်းလေးတွေနဲ့ တင်ပြီး ညွှန်းပေးကြပါလားဗျာ…. တကယ် အကျိုးရှိပါတယ်….
ဂုတလော နောက်ကြောင်း ပြန်ချင်နေတယ်။
(ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာလို့ ထင်တယ်) ဟိဟိ။
ကိုယ်တွေကို ကောင်းစေချင်လို့ ရေးထားတဲ့၊ တိုးတက်စေချင်လို့ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ မဖတ်ဘူးခင်ဗျ။
အော်ပီကျယ်ရဲ့ ကျကျမ်း ပဲ ကြိုက်တယ်။
အသစ် မဖန်တီးနိုင် လို့ 
အ ဟောင်းပြန်ဖေါ် နေတာပါဗျာ။
အဲ့တုန်းက စာမ ရေးတတ်ပေမယ့်
ရိုးသား ခဲ့တာ ဗျ။
နာကျင် ညစ်ထေး စွန်းပေ မှုတွေနဲ့ 
အဖြူရောင် အင်းကျီ တစ်ထည်လို
ဟေးဟေး ဒိုင် တွေက လန်းတယ်နော်
စာအုပ်တိုက်ရောက်ရင် မေးဝယ်ကာ ဖတ်မယ်ဗျာ။